दयाबाट धोका – " सुलभ खबर "
दयाहाङ राई अनुशासित कलाकारका रूपमा चिनिन्छिन्। बोलेको कुरा हत्तपत्त टार्देनन्। तर, यो पटक दयाको बोलीले पनि धर्म छाडेको छ। दयाले अन्तिम समयमा सुटिङबाट हात झिकेपछि ‘लप्पनछप्पन २’ निर्माताले राम्रै घाटा बेहोरेका छन्।
दया ‘लप्पनछप्पन’को पहिलो भागमा प्रहरीको भूमिकामा थिए। दोस्रो भाग बन्ने भएपछि निर्माता÷निर्देशकले उनलाई फेरि त्यही भूमिकाको निरन्तरताका लागि आग्रह गरे। दयाले पनि नाइँनास्ति गरेनन्। दशैँअघि युरोपको सेड्युल सक्ने मनसायले बेल्जियममा सुटिङ भयो। तर, विविध कारणले सुटिङ पूरा भएन। कलाकारको टोली सेल्फी खिचेर फर्कियो।
दशैँलगत्तै फिल्मको सुटिङ अस्ट्रेलियामा थियो। तर, दयाले यतिञ्जेलसम्ममा कवि÷लेखक उपेन्द्र सुब्बाको फिल्मका लागि समय दिइसकेका थिए। दयाले दुइटामध्ये एउटा फिल्म छाड्नुपर्ने थियो। उनले ‘लप्पनछप्पन २’ छाडे। सुटिङमा नगएको फिल्म छाड्दा केही फरक पर्ने थिएन, तर दयाले फिल्मको केही भाग सुटिङ गरिसकेका थिए। अहिले उनको ठाउँमा शिव श्रेष्ठका छोरा खेल्ने खबर छ। भित्री कथा जेसुकै होस्, बाहिरबाट हेर्दाले दयाले ‘लप्पनछप्पन २’लाई धोका दिएकै देखिन्छ। के यो दया स्टार भएको लक्षण हो ?
रमेश प्रसाई विवाद वन्धनमा बाँधिदै, यी हुन् उनकी दुलही !
काठमाडौँ – प्रखर वक्ताको रुपमा सर्वत्र चर्चित रहेका रमेश प्रसाईले लगन-गाँठो कस्ने भएका छन्। पछिल्लो
यी हुन् विश्वकै धेरै कमाउने अभिनेत्री, कति आम्दानी ?
एजेन्सी– एकजना अभिनेत्रीको बार्षिक आम्दानी कति होला ? तपाईंलाई अनुमान लगाउन कठिन हुनसक्छ । अमेरिकी
बिहे गर्दै नायिका केकी अधिकारी, कसकी दुलही बन्दैछिन्
नायिका केकी अधिकारी एक सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराएको तस्वीरमा बेहुली बनेकी छिन् । अहिले पाल्पामा छायांकन
काठमाडौं । गायक तथ कार्यक्रम उद्घोषक आदित्य नारायण आज बैवाहिक जीवनमा बाँधिदैछन् । उनी आफ्नी
लोकप्रिय गायक उदितनारायण झाको आज जन्मदिन, बिहानैदेखि शुभकामनाको ओइरो
काठमाडौँ । लोकप्रिय गायक उदितनारायण झाको आज जन्मदिन परेको छ । सन् १९५५ मा आजकै
सधै स्वास्थ र निरोगी हुनको लागि खानपानमा यी १० सर्त अपनाउनुहोस
अन्तिम संस्कार पछि फर्किंदा नगर्नुहोस् यी गल्ती
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन -हेर्नुहोस् मंसिर १७ गते बुधबारको राशिफल
प्रेसर कुकर पड्किँदा रोकाया गम्भीर घाइते
विष्णु पौडेलको ‘बर्थ डे केक’ खाएपछि बालुवाटारमा बाझाबाझ